आमाले सहकारीबाट लिएको ऋण उठाउन जान्थे यी युवक जब छोरी नै मन परेपछि भयो यस्तो घटना |
आमाले सहकारीबाट लिएको ऋण उठाउन जान्थे यी युवक जब छोरी नै मन परेपछि भयो यस्तो घटना
November 16, 2021 November 16, 2021 adminLeaveaComment on आमाले सहकारीबाट लिएको ऋण उठाउन जान्थे यी युवक जब छोरी नै मन परेपछि भयो यस्तो घटना
प्रेमलाई केहीलाई रोक्न सक्दैन भन्ने उदाहरण एक जोडीले प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरुको पहिलो भेट पनि अचम्म तरीकाले भएको थियो । यो घटना भारतको हो । बिहारको राजधानी पटनामा झारखण्डकी एक केटी र झारखण्डका एक केटाले विवाह गरेका छन् । पटनाको फुलवारी शरीफ थानाका प्रहरीहरूले यो मायालु जोडीलाई विवाह गराए । केटा झारखण्डको बारादिहका बासिन्दा हुन् भने केटी झारखण्डको रामगढको हजारीबागकी बासिन्दा हुन्।
जानकारीका अनुसार झारखण्डको रामगढस्थित हजारीबाग निवासी केटीकी आमाले ऋण लिएकी थिइन् । सहकारीबाट लिएको ऋणको पैसा तिर्न सकेनन् । जसका कारण झारखण्डको बरादिह निवासी रिकभरी एजेन्ट अमर कुमार युवतीको घरमा जान थाले । अमरले केटीकी आमालाई ऋणको पैसा फिर्ता गर्न भन्न थाले । ऋण असुलीका क्रममा रितु नामकी युवतीले अमरकुमारसँग लगातार भेट गरिन् र उनलाई आफ्नो मन दिएकी थिइन् ।
अमर र रितु दुवैको माया समयसँगै बढ्न थाल्यो । केही दिनपछि एक समय यस्तो आयो जब दुवैले सँगै बाँच्ने र म र्ने वाचा गरे । युवती अमरसँगको घर छोडेर बिहार भागे र दुवै पटनामा बस्न थाले । युवती र युवक विगत ६ महिनादेखि पटनाको फुलवारी क्षेत्रमा बस्दै आएका थिए ।दुई दिनअघि अमरले युवतीसँग बिहे गर्न अस्वीकार गरेका थिए । यसपछि केटी फुलवारी शरीफ प्रहरी चौकी पुगेर पुलिसलाई आफ्नो पूरै कथा सुनाइन् । अमर विरुद्ध उजुरी दिन आएकी युवतीलाई मनाउन थालेपछि प्रहरीले दुवैबीच सम्झौता गराएको थियो । प्रहरीको उपस्थितिमा दुवैले फुलवारी शरीफको शिव मन्दिरमा विवाह गरेका थिए । विवाहपछि दुवै झारखण्ड फर्किएका छन् ।
उठ्ने बित्तिकै गर्नुहोस् यी काम,रातारात बन्नुहुनेछ धनी !
तीव्र गतिमा फैलिने कोरोना जस्तै नोरो भाइरस भारतमा देखियो,नेपालमा पनि बढ्यो खतरा?कसरी जोगिने?
अबदेखि आवेदन दिएको १५ दिनमै परीक्षा, घरमै लाइसेन्स:यातायात विभाग
भाईरल झाँक्रीको ताप्लेजुङमा निधन,दाहिने हातको हत्केलामा।
चार कोठे घरमा काठको झ्याल-ढोका राख्दा चौकोसमा कति खर्च लाग्छ?